Catz Uyageza ...
umbuzo Catz Uyageza ...
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #203 by PAYSON
Ingaba ukho omnye umntu ukutyelela catz ziyageza / icons ngamathuba athile kwakhona umxokozelo-abaqhubi panel kunye plugins? Ndaza ndafumana nangona oko ngumbandela "ezingangqubaniyo kubo bonke" into, izinto ezigudileyo emva kotyelelo apho. I mhlawumbi kufuneka afumane nje SPAD kodwa mna ndive iye ezingathandekiyo nto ngokwakhe encinane.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #204 by Gh0stRider203
Akuzange kukhe kufuneke ukuba, ngokunyaniseka.
NDANDIDLA ukuba i icons zilungiswe x45 kodwa yam yokugqibela busted phezu kwam>.> NGABA okukhuphisana kwi x55 eBay kodwa waba majorly outbid
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #209 by kolijahc
akazange x45 bakho basigqithe njani? ukwazi nje, iimbiza wam waphuma. Yaba lwam malunamathele ntaka ozithandayo emva ndathatha imithombo ngaphandle. Ndeva ukuba kuyenzeka ukubuyisela nabo ngokutshizwa imilingo, ndathenga kodwa kusafuneka sizame. Ngoxa elinde ukuba lwezeenqanawa zamazwe ngamazwe, ndaqalisa bengena eBay ngokunjalo. Wafumana CH intonga intle ungafumana (fighterstick USB) kuba ngathi $ 40USD, kwaye ihamba pro USB for $ 60USD. Zonke ke kufuneka lo umcephe yaye ndiza konwaba.
Andibanga amathamsanqa kunye x55 kunye x56 eBay. Nokuba ndlela overpriced, okanye udweliso enomthunzi (kuphela intonga kwaye umcephe leyo zonke busebenze okanye vice versa) okanye angavavanywanga (lowo ungenaye izibuko-USB kunye 30 imizuzwana?)
Abantu abaninzi bayakuthanda labathiya, kodwa enye amaxabiso i Ndizibonile ke thrustmaster HOTAS X ($ 20USD), kodwa khangela ukuba omnye blue nto leyo HOTAS 4 ($ 30USD). Ndiya kwenza isibini iiMDO ekhawulezayo (sizakugrumba imingxuma isibini ukuba igqityezelwe ngesiphatho paracord, ndinqumle esisangqa ngeenxa lolungelelwaniso spring neqhina ukwenza kumphati entwasahlobo emva umlinganiselo kwimibhobho ntaka) kwaye ubanike kude nabahlobo bam ukuba ufuna ukufunda ntaka. yenza intonga laptop emangalisayo xa unako ukwenza into damn ngokulula.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #215 by PAYSON
Hi KC, Andizange i X-45, ndicinga imiyalezo enza crossover. Zonke I ndayiva abanini yinkqubo yolawulo X-55 HOTAS i icons zilungiswe ngayo. Kufuneka ukuba bayinto "nesithandwa". Ukuba wayefuna nje intonga kunye namaqhosha kengoku ukubuyela Logitech wam Ephakamileyo, oko konke kufuneka ukuba kulinga-moya. Ukuba (njengoko I) enze nasiphi na zilwe ngokuchasene ethile AI kakhulu, ngoko ke X-55 (okanye 65) "inkqubo yolawulo" yeyona itikiti HOTAS shushu.
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #217 by Gh0stRider203
kuqala, isuswe iposi yakho phindo lol ndiqinisekile ukuba akukho ngabom ngoko akukho ixhaphayo ujikeleze ibala lol
andazi bonke baya into phambili intonga kodwa endiyaziyo inxalenye umcephe busted xa elahlekile eseleyo YAM isandla sam wehla phezu emphinini, undingqavulayo it off.
uyilo ubusilika ukuba umcephe wokunyusa, ukuba ubuza kum ... ndikwazile ukwenza ulungiso zokwexeshana usebenzisa tape ezithile zonyango kodwa uyazi ukuba oko gonna ngonaphakade.
Ngaphandle intonga ke, ukunyathela umcephe wokunyusa nto ngamampunge. Enye umzuzwana ndiza kusebenzisa intonga, le elandelayo pick it up ukuba ungawatyumzi ibug (Into ndikuthiyile kakhulu indlu yam le roaches damn. I Ndiye kuthiwa emzini kodwa loo nto yenziwe ngokucacileyo akukho okulungileyo ngoko mna ndicinga My umnxeba ESILANDELAYO ukuya County Health iSebe)., ndibeka oko umva phantsi kwaye bayeke ukusebenza. Mna nje wtf? ngokwenene?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #218 by Gh0stRider203
PAYSON wabhala: Hi KC, andizange waba X-45, ndicinga imiyalezo enza crossover. Zonke I ndayiva abanini yinkqubo yolawulo X-55 HOTAS i icons zilungiswe ngayo. Kufuneka ukuba bayinto "nesithandwa". Ukuba wayefuna nje intonga kunye namaqhosha kengoku ukubuyela Logitech wam Ephakamileyo, oko konke kufuneka ukuba kulinga-moya. Ukuba (njengoko I) enze nasiphi na zilwe ngokuchasene ethile AI kakhulu, ngoko ke X-55 (okanye 65) "inkqubo yolawulo" yeyona itikiti HOTAS shushu.
ya kubona andikwenzi oluninzi zezulu ukuba yokulwa emoyeni, kodwa I LOVE yonke imisebenzi kwi 55 njengoko ngoxa mna MUSA becala ukubhabha jumbos ... ndafika kugcwele ungasayisebenzisiyo yonke iqhosha single lol
Ekubeni ukwenza ILS ngaphezulu lisondela kule mihla (Ndandidla kukuthiya ILS ngoku mna ndiyayithanda lol), ndithanda ukuba ukuhlela isibini ukuba yayizihambela ukutshintshela ukusuka GPS ukuya NAV1 kwaye ukusuka NAV Yokusondela. Ndicinga ngale nto kuphela ngenene wasebenzisa keyboard xa ndithe ndafumana 45 wayeza ukuthetha ATC, vula / cima APU, nezinto ezincinane mhlawumbi 1 okanye 2 lol
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #221 by PAYSON
KULUNGILE ! Ndimele ndibe kwiforam engalunganga. lokuxolisa abaninzi .gtg
Ixesha ukwenza page: 0.180 imizuzwana